Ama-immunomodulators (izidakamizwa): zizuze futhi zilimaze
Ngesikhathi izinguquko zokushisa zonyaka, abantu abaningi bacabanga ngokuqinisa izivikelo zomzimba. Abanye bavame ukuchitha isikhathi esiningi emoyeni badle ukudla okunempilo, kanti abanye bathanda imithi ekhethekile kuma-immunomodulators ngaphandle kokuqonda imiphumela yabo. Imithi kufanele isetshenziselwe injongo ehlosiwe. Ukungaxilisi izidakamizwa kungabangela umonakalo omkhulu emzimbeni.
Imithi ethinta ukusebenza komzimba wamasosha omzimba kuthiwa yi-immunomodulators. Yonke imithi evela kulolu chungechunge ingahlukaniswa ngamaqembu amabili. Ezinye zazo zivuselela ukusabela kwamagciwane, ngaleyo ndlela zandisa imisebenzi evikela umzimba. Kodwa empilweni, izidakamizwa ezivimbela ukuzivikelwa komzimba nazo ziyasetshenziswa. Ngaphandle kwalokho kungasetshenziswa ngokuzimela ngamagciwane. Ukulungiswa kohlelo olunjalo kunqunywe udokotela kuphela.
Ama-immunomodulators angabuyisa izivikelo zomzimba ezifweni ezihlukahlukene. Ngokuvame kakhulu ukuthi kunqunyelwe ukwelashwa kwezifo ezibangelwa amagciwane kanye nesibhedlela esibhedlela. Lokhu kuvumela umzimba ukuba uvele ngokushesha ngemva kokugula. Ukuze kuvikelwe, odokotela abalokothi banikeze abazivikeli be-immunomodulators. Amalungiselelo avela kulolu chungechunge awazuzanga impilo enempilo.
Ubani obonisa ngempela ama-immunomodulators?
Izidakamizwa ezinamandla ezivuselela amasosha omzimba, zinikeze abantu abanezinkinga ezinkulu zempilo. Kunezifo eziningana lapho umzimba ungakwazi ukubhekana nezifo ezilula ngokwawo. Lokhu ikakhulukazi i-HIV. Ukuze umuntu azizwe engokwemvelo futhi angengozini yecothermia encane, udinga ukugcina umzimba wakhe ngemithi ebiza kakhulu.
Ukusetshenziswa kabi kwesimiso sokuzivikela komzimba kungase kwenzeke nasezincane ezisanda kuzalwa ngaphambi kwesikhathi. Kumntwana wayekwazi ukuphefumula ngokuzimela futhi athuthuke ngendlela evamile, unqunywe ukuzivivinya umzimba. Uhlu lwezidakamizwa ezingahle lunqunyelwe izinsana alukhulu kakhulu. Zonke imithi ezivela kulolu chungechunge zibiza kakhulu.
Ukukhuthazwa kwesimiso somzimba sokuzivikela emantwaneni
Ngokuvamile, abazali bakhathazekile ngempilo yezingane lapho beqala ukuya enkulisa. Ingane engakaze igule ngaphambili iye yaqala ukubamba ukutheleleka cishe njalo ngenyanga. Lokhu kuyinto evamile ngokuphelele. Ingane ingena endaweni entsha ne microflora yayo kanye namagciwane. Kuze kuqinisekiswe ukuthi amasosha omzimba aqiniswa, ingane izoqhubeka nokugula. Lokhu kubizwa ngokuthi "ukujwayela enkulisa." Akulungile ukusebenzisa phakathi nalesi sikhathi ama-immunomodulators. Ukulungiswa kwalolu hlelo kuphelisa kuphela ukuthuthukiswa okujwayelekile kokuzivikela komzimba. Ukubhekana nezilwanyana ezincane, ingane kufanele ibe yedwa.
Isizathu sokukhathazeka singase sibe ukuthuthukiswa kwezinkinga emva kokunye kubanda. Uma i-snot elula iphela nge-purulent otitis, futhi isifo somzimba nge-angina, udokotela angase anikeze ukweluleka ukuthatha imithi yokuzivikela. Uhlu lwezidakamizwa zesiguli ngasinye luhlinzekwa ngabanye ngesimo sesifo kanye nezici zomzimba womntwana.
Kungani abantu abadala bevame ukuphuma?
Kumuntu omdala omzimba kumele asebenze ngamandla. Akuyona ingozi kulabo abazwa ukukhathala okungapheli futhi begula njalo, ngokushesha bagijimele ekhemisi bese bethola imithi yokuzivikela. Futhi empeleni kuqala kubalulekile ukuqonda izizathu zalesi simo. Kunconywa ukuvakashela udokotela. Ngokuvamile, impilo embi kanye nokukhathazeka kuhlotshaniswa nokuba khona emzimbeni wesifo esingenasifo sokutheleleka. Kungase kungelapheki ngesikhathi se-tonsillitis noma emgodini wezinyosi ezinqabile ezinyoweni.
Imithi kufanele isetshenziswe kuphela lapho isimo somuntu sikhula ngokuphawulekayo. Ngokuvamile, izidakamizwa eziphikisanayo kanye nama-immunomodulator zisetshenziswa ndawonye. Ukuba khona kwamangqamuzana abulalayo emzimbeni kubonisa ukuthi imisebenzi yokuzivikela ayisebenzi kahle. Ukwelashwa kulokhu kufanele kube okuphelele. Isetshenziswa izidakamizwa ezibiza kakhulu ezikwazi ukubuyisela ukuzivikela ngokushesha ngangokunokwenzeka. Ngezansi uhlu lwezidakamizwa zokuzivikela ezitholakala kuma-pharmacy asekhaya.
Imithi yezidakamizwa isekelwe kwi-thymus gland yezinkomo. Iqukethe ama-amino acids, ama-oligopeptide nama-salts angenangqondo. Isidakamizwa siqinisa ngokuqinile ukuvikelwa komzimba, futhi siphinde sithinte ukuthuthukiswa kwe-hypersensitivity. Isidakamizwa esithi "Vilozen" sisetshenziselwa phezulu. Ezamakhemikhali, lesi sidakamizwa senziwa ngendlela yamaconsi angagcinwa ekhaleni noma angene kwisixazululo sokungena. Ngokuvamile, ngokuphendula okweqile, ama-immunomodulator anjalo nama-immunostimulants anqunywe. Amalungiselelo afana ne "Vilozen" abhekane ngokugcwele nokukhwehlela kanye ne-edema yama-mucous ngesikhathi sezintwa zezimbali.
Amaconsi "ase-Vilozen" anqunyelwe abantu abadala kanye nezingane ezingaphezu kweminyaka engu-12 ubudala. Awukwazi ukuwasebenzisa ngendlela yabo ehlanzekile. Uma lesi sidakamizwa sisetshenziselwa ukugxilisa ingxube emakhaleni, engeza 2 ml amanzi noma isisombonic sodium chloride isixazululo ku-ampoule. Ngenkathi ukwanda kwesifo, amaconsi angu-7 ajojowe emaqenjini ayisithupha ngosuku. Ukwengeza, ukungena kwe-intranasal kungenziwa. Inkambo yokwelashwa ingase ingabi ngaphezu kwezinsuku ezingu-20. Imiphumela emibi evela ekusetshenzisweni kwelashwa ikhona, kodwa ingakhanselwa kuphela uma izingxenye zomuntu zingavumi. Ezinsukwini zokuqala zokuthatha amaconsi "i-Vilozen" kungase kube nobuthakathaka obuncane kanye nosizi.
Isidakamizwa senziwa ngokucophelela ezigulini ezine-asthma e-bronchial. I- broncho-obstructive syndrome ebizwa ngokuthi i- broncho-obstructive syndrome noma ukutholakala kwe-bacterial acute yi-contraindication ekusetshenzisweni kwamaconsi "e-Vilozen".
Lesi sidakamizwa singeqembu le-homeopathic, ngakho lingasetshenziselwa izingane kusukela esemncane, kanye nabesifazane ngesikhathi sokukhulelwa kanye nokulahlwa. Isidakamizwa sishukumisa isenzo semisebenzi ye-detoxified yamaselula omzimba womzimba. Ukukhuthazwa kwezidumbu zokuzivikela ezingenakulimaza kakhulu empilweni. Ukulungiswa kwe "Galium-Hel" kuhanjiswa kuma-pharmacy ngendlela yesisombululo. Mnikezele kaningi kubantu abaye bahlupheka kakhulu izifo ezithathelwanayo. Izifo ezigulayo, ezihambisana nokuphulwa kwe-enzyme metabolism, ziyisibonakaliso sokusetshenziswa kwamaconsi okuthi "Galium-Hel". Ngaphezu kwalokho, lesi sidakamizwa sishukumisa kahle imisebenzi yokuzivikela yomzimba kubantu asebekhulile kuneminyaka engama-70.
Ngaphandle kokubonisana nodokotela, ngisho nama-immunomodulator asekhaya (izidakamizwa) angeke asetshenziswe. Lokho okulimaza izingane kanye nabantu abadala, akulula ukuqagela. Imisebenzi yokuvikelwa, eyongezwa kakhulu ngemithi, ayisebenzisi amandla awo aphelele ngokwabo. Umzimba onempilo ungabhekana nokutheleleka. Usizo ludingeka kuphela ezimweni ezinzima kakhulu.
Ukulungiselela "iGalium-Hel" kungabhalwa udokotela kuphela. Isilinganiso sinqunywa kuye ngesimo sesifo, kanye nezici eziqondene nomzimba wesiguli. Ngokuvamile sebenzisa amaconsi angu-10 izikhathi ezintathu ngosuku. Ngesikhathi ukwanda kwesifo, ungathatha amaconsi angu-10 njalo isigamu sehora. Kulesi simo, isilinganiso samalanga onke akufanele sidlule amaconsi angu-200. Iziguli ezinezimo ezingenakuqhathaniswa kuhle ukusebenzisa amaconsi "iGalium-Hel" ngokuhambisana namanye amalungiselelo asekhaya.
Ukwakhiwa kwalesi sidakamizwa kuhlanganisa i-juice Echinacea, okugqugquzela umongo we-hematopoiesis. Ngenxa yokuthatha i- "Immunal", inani lama-leukocyte egazini landa cishe kabili. Ngaphezu kwalokho, lesi sidakamizwa sinomphumela we-antiviral. Kubekwe ngokubambisana neminye imithi yokwelashwa kwe-herpes nezifo zokuphefumula.
Izidakamizwa ze-antiviral zivame ukusetshenziselwa ukuvimbela amakhaza kanye nomkhuhlane phakathi nezinguquko zokushisa zonyaka. Izingane ezineminyaka engaphansi kwonyaka "Ukungavunyelwa ngokomzimba" akubekiwe. Ngesikhathi ukwanda kwezifo eziwumshayabhuqe umuthi uthathwa kanye ngosuku. Abantu abadala banamaconsi angu-20 esixazululo. Izingane zokulinganisa zinqunywa yobudala. Izingane ezingaphansi kweminyaka engama-6 ubudala zinamaphesenti angu-5-10. Ngomkhuhlane, isidakamizwa esithi "Immunal" singathathwa izikhathi ezintathu ngosuku. Inkambo yokwelapha akumele idlule amasonto angu-8. Ukuze kuqinisekiswe ukuvimbela ukuzivikela, kuyokwanela ukuthatha isidakamizwa isonto.
I-agent "Immunal" cishe ayinayo imiphumela emibi. Ezimweni ezingavamile, i-hypersensitivity ezakhiweni zomuntu ngamunye zivela. Ngokugcina isitoreji eside, i-"Immunal" ingakhula. Akufanele baphonswe. Kudingekile ukugubha ibhodlela izikhathi eziningana, futhi okuqukethwe kuzobuyela esimweni sabo sangaphambilini.
Umsebenzi ojwayelekile womsebenzi wokuzivikela womzimba womuntu awunakwenzeka ngaphandle kwemisebenzi ekhethekile - i-immunoglobulins. Kodwa ngenxa yezizathu eziningana le nto ingapheli ukukhiqizwa noma ikhona emzimbeni ngobuningi. Usizo lungeza imithi, enye yayo ibizwa ngokuthi - "Immunoglobulin." Ngokuvamile, lesi sidakamizwa sisetshenziselwa ukwelashwa esikhundleni sokuvimbela isifo sokuvimbela ama-immunodeficiency syndromes. Ngaphezu kwalokho, umuthi ungabekwa uma izivikelo zomzimba zingasabhekana nesifo esithinta isifo esibi kakhulu. Kungaba yisifo se-sepsis, izifo ezinamandla ze-bacterial. I-agent "Immunoglobulin" ingahle ibekwe kwabesifazane abakhulelwe uma i-Rh-iphikisana nomntwana, kanye nezingane ezingaphambi kwesikhathi ngenhloso yokuvimbela izifo ezinzima.
Ama-immunomodulators ayabiza kakhulu. Ukulungiswa kwezingane kanye nabantu abadala kunqunywe kuphela lapho kunengozi enkulu empilweni nasezempilo. Izindleko ze-ampoule eyodwa ye-immunoglobulin ayi-ruble engaphansi kwe-1000.
Isidakamizwa senziwa nge-intravenously nge-dropper. Isilinganiso sinqunywa udokotela kuye ngokuthi ifomu nesibindi saleso sifo. Umthamo owodwa akufanele udlule u-0.8 g / kg isisindo somzimba. Ngokuvamile, imithi inikezwa kanye futhi iphindwe inqubo emavikini ambalwa. Abesifazane abakhulelwe abane-rhesus-confit "Immunal" bathathwa ngemuva kwamasonto angu-32 wokukhulelwa.
Imiphumela emibi ingenzeka emahoreni ambalwa okuqala ngemva kokuthatha lesi sidakamizwa. Kungaba yisidlova, isicanucanu. Izinzwa ezingathandeki ngokushesha zidlule. Ngosuku lokudonsa, isiguli siyalulekwa ukuba sithobele ukuphumula kombhede futhi singalungiseleli amacala amakhulu. Imithi yokwelapha "Immunal" kuphela iziguli ezinokubekezelelana ngabanye.
Isidakamizwa sezokwelapha, esisetshenziselwa njengengxenye yokwelashwa okuyinkimbinkimbi yomdlavuza kubantu abadala. Ezamakhemikhali, i-agent ihanjiswe njengesixazululo sejoza. Uma kwenzeka umdlavuza, ama-immunomodulator kumele asetshenziswe. Amagama izidakamizwa ezingashintsha umuthi "Leakadine", udokotela uzokutshela. Imithi yalolu hlelo ayinayo nje umphumela wokuzivikela, kodwa futhi inqanda ukukhula kwezicubu ezimbi.
I-leakadine ihlanjululwe ngesisombululo se-isotonic sodium chloride ngaphambi kokusetshenziswa. Isiguli sigonywe kanye ngosuku ngosuku lwamasonto amabili. Uma kunesidingo, phinda inkambo ngenyanga. Kunemiphumela emibi yemiphumela ye-immunomodulators (izidakamizwa). Ukubuyekezwa kubonisa ukuthi isisombululo se-Leakadine singabangela ukuncipha kwengcindezi yegazi, isizungu, ukuphathwa ikhanda. Uma kwenzeka ukuwohloka okubukhali esimweni sezempilo, umthamo wesidakamizwa wehlisa. Ukukhansela ngokugcwele ukwelashwa udokotela kuphela uma kwenzeka ukungaboni ngaso sonke isikhathi.
Ama-immunostimulants emvelaphi yemvelo
Akusikhathi ngaso sonke isikhathi kusetshenziselwa ukusebenzisa ama-immunomodulators. Uhlu lwezidakamizwa lukhulu kakhulu. Kulesi simo, yonke imithi ihloselwe ukwelashwa kwezifo ezibi kakhulu. Khona-ke, ukuzivikela komzimba kungaqiniswa kanjani phakathi nezinguquko zokushisa zonyaka? Kukhona umkhiqizo omkhulu wemikhiqizo ekhuthaza imisebenzi yokuzivikela yomzimba. Okokuqala, lesi sithelo sine-ascorbic acid. Ngasekupheleni kwekwindla, ukudla kufanele kufaka izithelo ze-citrus. Ingxenye eyodwa kuphela yelamula etazini ingaqinisa ngokuphelele umkhuhlane.
Uma ungeke ukwazi ukugwema ukubandayo, kufanele ufake imikhiqizo yobisi nobusi ekunakekeleni izidakamizwa. Amalungiselelo e-Interferon kanye nama-immunomodulators emvelaphi yemvelo ahlangene ngokuphelele. Ngaphezu kwalokho, kungenzeka ukuqinisa ingculazi ngosizo lwe-tincture ye-echinacea. Ungayithenga ekhemisi.
I-ointment oxolinic. Imiyalo yokusetshenziswa
Ukwelashwa kwezifo zenhliziyo: izidakamizwa zokulwa nezidakamizwa
Ukudla Umklami Elementaree: Izibuyekezo
Pancake ku-microwave: zokupheka